Hiran State - News: War Deg Deg ah: Mudanayaasha baarlamaanka kumeel gaarka oo labo u kala jabay.
War Deg Deg ah: Mudanayaasha baarlamaanka kumeel gaarka oo labo u kala jabay.
HS:-Magaalada Mogdisho waxa ka socda qilaaf weyn oo u dhaxeeya mudanayaasha baarlamaanka kuwaasi oo intooda badan ka soo horjeeda amaba doonaya iney xilka ka qaadaan Shariif Hasan oo isagu ka cabsi qaba hadii baarlamaanka la furo inuu lumayo daha uu wakiilka gaarka ah ee QM Somaliya ka leeyahay.
Laakinse marka dhinaca kale laga eego arinta waxaa jiro tiro kale oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo iyaguna ku fikir ah gudoonka baarlamaanka si ay u difaacaan xil ka qadistiisa iyagoo ku qanacsan inba baarlamaanku iska xirnaado oo ay Hotelada Mogdisho iska degenaadaan iyadoo uu wadanku ku jiro xaalad adag maadama ay maslaxadooda oo kaliya fiirsanayaan kuwa ku fikirka ah Shariif Hasan.
Guddomiyaha baarlamaanka oo qorsheynaya safar uu ku tagayo wadanka Taliyaaniga ayaa laga yaaba inuu dalka ka dhoofo iyadoo ay kala qeybsan yahiin mudanayashi uu gudoomiyaha u ahaa oo qaarkood isaga dhaliilsan taasi oo laga yaabo inu safarkan kala soo kulmo waji gabax iyo ceeb maadama dunida laga eeganayo hab dhaqanka baarlamanka aan ilkaha laheyn ee iska xiran markii la doonana la furo.
Qilaafkan cusub ayaa laga yabaa inuu xilkiisa gudoomiye ku waayo gudoomiyaha baarlamanka oo ay mudanayaashu xitaa geed hoostiis hadii ay ku shiraan xilka kaka qaadi karaan Shariif Hasan maadaama ay iyagu horey u doorteen.
Sida muuqata Shariif Hasan Shiikh Aden oo mudo ahaa gudoomiye baarlamaan hadii uusan xeelado cusub la imaan mustaqbalkiisa siyaasadeed mugdi ayuu ku jiraa.
· admin on December 12 2011 14:15:04 · 0 Comments · 1969 Reads ·
14,666,046 unique visits